हरियो पिरो खुर्सानीको फाइदै फाइदा : तौल घटाउनदेखि डन्डिफोर गायब गर्न सम्म ! « Lokpath
२०७६, १६ फाल्गुन शुक्रबार ०९:००
हरियो पिरो खुर्सानीको फाइदै फाइदा : तौल घटाउनदेखि डन्डिफोर गायब गर्न सम्म !
प्रकाशित मिति : २०७६, १६ फाल्गुन शुक्रबार ०९:००
काठमाडौं – तपाई पिरो खुर्सानी कत्तिको खानुहुन्छ ? कि नाक खुम्च्याएर पिरो तरकारी भएको भान्छामा नै छिर्नुहुन्न । यदि पहिलो बानी भए त ठिकै छ । दोस्रो बानी अर्थात् पिरो देखेर पनि डराउन ेबानी छ भने हलुका पिरो खाएको राम्रो । किनकी हरियो खुर्सानीबाट कैयौँ पोशक तत्वहरु पाइन्छ । खुर्सानीले खानाको स्वाद मात्र बढाउँदैन, शरीरको वजन घटाउनेदेखि मुटुसम्बन्धी रोग र पिनासको लागिसम्म यो लाभदायक छ ।
यसमा भिटामिन ए, बी, सी, आइरन, कपर, पोटासियम, प्रोटिन र कार्बोहाइड्रेड आदि पोशकतत्व पाइने र तिनले शरीरमा निकै स्फूर्ति बढाउँछन् । यद्यपी अत्याधिक पिरो त्यसमा पनि मसलेदार खानेकुराले छाती र पेटमा समस्या गर्छ । यसबारे भने सचेत हुनुपर्छ । कतिपयले हरियो खुर्सानीलाई स्वास्थ्यसँगै सौन्दर्यका लागि पनि प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् । दैनिक हरियो खुर्सानी खाएमा रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्छ । अनुहारमा आउने डन्डिफोरबाट समेत राहत मिल्छ । यसमा पाइने प्रचुर मात्राको एन्टिअक्सिडेन्टका कारण ओक्साइडेसनलाई कम गर्छ । जसले कोषिकालाई स्वस्थ्य रहन मद्धत गर्छ । र रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बलियो हुन्छ ।
डन्डिफोर हटाउन : हरियो खुर्सानी छालाका लागि फाइदाजनक मानिन्छ । अनुहारमा दाग धब्बा वा फोहोर जस्तो देखिन्छ भने यसलाई चिटिक्क पार्न पनि तपाईंले हरियो खुर्सानी खानाको साथमा मिलाएर खान सक्नुहुन्छ । यसबाहेक डन्डिफोरले अत्याधिक सताएको छ र नियमित ठिक्क मात्रामा पिरो खानुहुन्छ भने तपाईलाई ठिक गराउन धेरै सहयोग गर्छ । खुर्सानीमा हुने भिटामिन ई ले छालाका लागि आवश्यक तेल उत्पादन गर्न सहयोग पुर्याउँछ । खानासँग मात्रा मिलाएर खाँदा छालामा समेत चमक ल्याउँछ ।